Ngabe uRamaphosa uzicubuzela amagabade ngokuhlelela uZuma isidlo sakusihlwa? | News24
Johannesburg – UMengameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ukuba asingathe isidlo sakusihlwa ngoLwesibili ebusuku ngenhloso yokuhlonipha lowo angene ezicathulweni zakhe, uJacob Zuma.
OweHhovisi likaMengameli uTyrone Seale uqinisekisile ukuthi uRamaphosa uzosingatha isidlo sangasese sikaZuma neKhabhinethi lakhe, lokhu ukwenza nje kuvunguza amahlebezi okuthi angase enze izinguquko kwiKhabhinethi lakhe.
Lesi sidlo, okulindeleke ukuba sithokozelwe eTuynhuys, eKapa, sihlelwe ngenhloso yokuvalelisa kuZuma namalungu aphezulu abesebenzisana nawo.
UZuma wesule esikhundleni ngesonto eledlule, kulandela izingxoxo phakathi kwakhe nobuholi obuphezulu be-ANC obusanda kukhethwa.
UZuma ubengekho ngesikhathi uRamaphosa ekhethwa njengomengameli, futhi wangabonakala noma esethula iState of the Nation Address.
OLUNYE UDABA: UNgqongqoshe wezeziMali uzocacisa ngemfundo yamahhala - Ramaphosa
Enkulumweni ekhethekile abanayo ne-SABC, ngaphambi kwamahora ambalwa amemezele ukuthi uyehla esikhundleni, uZuma wabuza ukuthi zithini izizathu zokukhishwa kwakhe emandleni. Waphinde wazwakalisa ukuthi akamelene nenhlangano, kepha akavumelani nabaholi bayo.
Imizamo yokuqinisekisa ukuthi ngabe uZuma uzoba khona kulesi sidlo, kayiphumelelanga.
Umhlaziyi weNews24, uRalph Mathekga, uthe kuyadida ukuthi kungani uRamaphosa ehlele lesi sidlo.
"Ngabe lokhu ukwenzela iKwaZulu-Natal? Ngabe uzama ukuthi, ningakhathazeki, senzela uZuma idili, sizomvikela," kubeka uMathekga.